Isihloko sihloko kuyinto umdlavuza duodenum futhi izimpawu zokuqala zesifo. Ngezansi, lesi sihloko kuzoxoxwa ngakho ngokuningiliziwe. Sifunda mayelana izimpawu, uphethwe, ukuphathwa nokuqagela ezinikeza ochwepheshe. Odinga ukukwazi mayelana le umdlavuza, ukufunda lesi sihloko.
umdlavuza duodenal - isifo ezenzeka abesilisa nabesifazane imvamisa alinganayo. Kuthinta ikakhulukazi abantu abaneminyaka engaphezu kuka-55. Intsha ithambekele pathologies 12 amathumbu bawa, kodwa lezi zimo awavamile.
Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi uhlobo izimbangela umdlavuza ngoba odokotela namanje imfihlakalo. Nokho, Lokhu kusho ukuthi odokotela ukwakha ezizathwini ezithile, wagomela ngokuthi kwaba isici esithile kubangela Oncology, akunakwenzeka. Okuxhunyanwa, ie sezizathu ezinkulu ezingaziwa ngisho isayensi, kodwa kungenzeka esikhulumi ukwenaba izimbangela yesibili umdlavuza, ukuthi ukukhuluma engcupheni. Abangase bazinikele ukuvela umdlavuza 12-duodenum.
Kukholakala ukuthi umdlavuza singenzeka ngenxa yezizathu eziningana. Umdlavuza 12 duodenum kungase kube nomthelela yezizathu ezilandelayo:
ukuhlukunyezwa ugwayi futhi ekubeni imilutha yotshwala;
pancreatitis, isifo sikashukela, noma amatshe ohlelweni urogenital;
ukusetshenziswa njalo kakhulu ukudla okuvela ezilwaneni;
Okunye engcupheni futhi isimo kwemvelo emvelweni, futhi umphumela ukuchayeka kumakhemikhali ukuze carcinogens. Ukubukeka izimila kanye kungase kube nomthelela ekusetshenzisweni amafutha ezilwane, ngenxa alolu lelitfutfukile cholecystokinin, nakho kungaholela Hyperplasia kwesembozo engenhla ipheshana wokugaya ukudla.
Muva nje, abacwaningi baye bathola ukuthi ezinye izingxenye ikhofi, futhi, kungaba nomthelela umdlavuza. Ngakho-ke, kufanele izimbangela kungenzeka ukungezwa ukusetshenziswa ngokweqile walesi siphuzo.
Development of Oncology ukuhlukanisa umdlavuza ngenxa papilla duodenal, kanye nomdlavuza imbobo Bile. Ithumba kuthinta wamathumbu akuyona ngokuphelele, kepha amasayithi ezimbalwa kuphela. Ngokuvamile kuba ingxenye ovundlile engenhla nengezansi, futhi umnyango phezulu. Inkambo zokwelapha lesi sifo kuncike kakhulu kwasendaweni umdlavuza.
Umdlavuza ukwehla ingxenye 12 isilonda liwile evame kakhulu, ama-75% amacala. Ukuthuthukisa ke kusukela epithelium we mucosa Imininingwane. Ukusungula indawo esiqondile bekulokhu kunzima, ikakhulukazi uma ucwaningo kwenziwa ezigabeni kamuva. Umdlavuza wamaphaphu duodenum, izimpawu lokuqala okungakwazi ngokushesha bagxumela amehlo, kuyingozi, ngoba impatho kunzima ngokwako, kodwa sekugcina indoda ithuba kancane.
Ingxenye engenhla ovundlile emathunjini umdlavuza kwasendaweni kuphela 12-15% of amacala. Izimila kule aphansi ingxenye ovundlile ubizwa nangokuthi umdlavuza infrapapilyarnym. imvamisa yayo isesikhathini 10%.
Esiboniswe umdlavuza duodenum? Izimpawu zokuqala zifana kakhulu nalezo abantu isipiliyoni in Oncology esiswini. Ukuze ukuthola umdlavuza ngesikhathi, oncologists kwabangela ukuba kube namaqembu amathathu izimpawu kungenzeka.
Iqembu lokuqala kungaphansi mkhuba lokudakwa. Libhekene ubuhlungu besisu, ukungakuthandi ukudla, ukucobeka kanye kwesisindo. Kuyaqapheleka futhi abangasinaki nezwe elibazungezile.
Iqembu sesibili siphathelene mkhuba isimiso. Konke kuqala lapho isimila siqala ukuba siqhubekele phambili nezinye izitho. Ngalesi sikhathi, uqala nomfutho wegazi ophezulu biliary, kwandisa ebukhulwini kwesibindi, indle kuba kungekho nto enemibala emihle. Jaundice kungenzeka. Odokotela uqaphele ukushayisana kwe senhliziyo uhlelo, izinso kanye isibindi ukwehluleka singenzeka baphazamise izinqubo umzimba.
Lo mkhuba kokucindezelwa kwenzeka emabangeni ngasekupheleni lesi sifo lapho umuntu ozwa ubuhlungu ephuma emishinini isimila phezu izinzwa kwamanyikwe.
Ingabe kunzima igunya ngokuya kodokotela iyona duodenum. Lapho kuba futhi kubuhlungu kanjani, abazi bonke abantu. Kuyinto esiswini ngezansi nje esiswini ngakwesokudla, ngaphezu inkaba. ubuhlungu Cancer kungaba ezahlukene, kuxhomeke kakhulu ezinyathelweni nesigaba lesi sifo futhi duodenal isifo isilonda kwasendaweni. Lapho futhi kubuhlungu kanjani, ungacela udokotela wakho uma kukhona izinsolo ku Oncology.
Anqume isifo bebodwa akulula. Izimpawu ze-umdlavuza duodenal ngendlela efanele usaqala ayikwazi ukutholwa, ngoba lesi sifo asymptomatic. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile abantu baqale ngempilo yakhe ngenxa yokuhlushwa akhe aqala njalo ubuhlungu besisu. Kanjani umdlavuza duodenum ukudlula isikhathi? Izimpawu eziyinhloko zihlanganisa ubuhlungu obukhulu besisu, okungazelelwe kwesisindo, jaundice, imfiva, ukulunywa futhi angafuni kudla.
Umdlavuza ezigabeni kamuva
Umdlavuza esiteji isilonda duodenal kuyinto 4. Eyokuqala ukwelashwa ezintathu kungasiza isiguli, kodwa lapho besanda yokugcina ayikwazi njalo ukusiza, ngoba konke kuncike ukwelashwa. Nokho, izimo ezinjalo okwenzekile.
Akubuzwa ngezimpawu ze-umdlavuza emabangeni kamuva ngoba okwamanje angakwazi avuse yezinkinga kwezinye izitho. Ngo isifo ezivamile ububonisa izimpawu zokudakwa. Futhi iyatholakala zenzo ziwukubonakaliswa ezifana:
kome nolwelwesi lwamafinyila;
ukuhlanza, ukukhishwa isisu, ukuqunjelwa, ukucanuzela kwenhliziyo;
Ngisho noma engayinaki ngezimpawu akafuni ukubona udokotela, nsuku saziso kufanele sinake lezi izimpawu zesifo:
ukuhlanza ngemva kokudla, ngemva kwalokho namanje kubonakala sengathi esiswini ugcwele;
Kufanele kuqashelwe ukuthi izibonakaliso umdlavuza duodenal ezingabantu ziyefana kwabesifazane.
Ukuze ukwelapha lesi sifo, kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngesikhathi, futhi lokhu kubalulekile ukuthola umdlavuza. Kuze kube manje, uphethwe yi-laboratory kanye nezindlela wezinsimbi. Ukuhlaziya isimila nakomaka umdlavuza isisu kanye duodenum kuzosiza ukukhomba amangqamuzana omdlavuza ngesikhathi. Kuyaphawuleka ukuthi izimpawu isimila - izinto neqhaza ekuthuthukiseni zamangqamuzana omdlavuza. Ukuxilongwa unezigaba ezintathu:
Ukuze uqalise ukuhlaziya pathologies yakhe nemlandvo wetekwelashwa kwakhe. Udokotela uhlola isiguli uchitha palpation besisu. Ikhumbula izikhalazo womuntu emitholampilo ezifana ukuhlanza, ubuhlungu besisu, ukungakuthandi ukudla.
Ngesikhathi esigabeni sesibili, isifundo laboratory isiguli, ehlanganisa jikelele igazi ukuhlaziywa, umchamo kanye sezinyawo ukuhlaziywa, kwamakhemikhali igazi ukuhlaziywa kanye isimila umaka.
Isigaba sesithathu kuyinto luhlolo wezinsimbi.
Isinyathelo wokugcina iyona ebaluleke kunazo zonke komdlavuza duodenal. Izimpawu kokuqala kungase aphanjaniswe noma ubufakazi ezinye izifo, kodwa thuluzi lokucwaninga ikuvumela ukuba wenze ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe. Doctor kunesithembiso esophagogastroduodenoscopy lapho bahlola emphinjeni, esiswini, Bile imbobo, futhi 12-Palaia emathunjini. Phakathi ukuhlaziywa kwezicubu bathathwa ukuhlaziya kwamakhemikhali.
Ngemva kwalokho, udokotela uqondisa nesineke esifubeni X-ray kanye umehluko esimweni 12 isilonda duodenal nasesiswini. Futhi, udokotela wakho angase akunikeze ultrasound, resonance kazibuthe kanye tomography ngekhompyutha. Ngesikhathi esifanayo isiguli uhlolwa bonke ochwepheshe.
umdlavuza Minyaka yonke kakhudlwana futhi evame kakhulu yokusebenzisa duodenum. Bangaki siphila nalesi sifo, akunakwenzeka ukuba aphendule, ngoba akuxhomekile nje kuphela esimweni esigabeni lapho kokuqala ukwelashwa, kodwa futhi isimo jikelele impilo yomzimba, ikhono layo ezimelana nezifo.
Ngokuvamile, ukwelashwa wenziwa isikimu classical. Okokuqala, isimila sisuswa surgically. Kungadinga ukususwa olulinganiselwe 12-duodenum. Ukuhlinzwa Kunconywa abangafika kwabangu-iminyaka engu-75, kodwa kuphela ngaphansi kwesimo sokuthi sasingekho Ukudlulela.
Ngemva ukususwa kuhlinzwa ka ngekhemikhali Ithumba edingekayo ukuze bahlanganise imiphumela. Kuyinto oyisibopho, njengoba uqinisekisa ukubhujiswa amaseli angavamile futhi ayanda yabo.
ukwelashwa ngemisebe uvame kwenziwe kusaqalwa lesi sifo, lapho kungenzeka ukwelapha isiguli ngaphandle ukuhlinzwa.
Ekupheleni noma ekuqaleni ukwelashwa ukwelashwa kungadingeka, okuhloswe ngalo ukususa izimpawu isiguli. Ekuqaleni kubalulekile ukusiza umuntu ziphathwe, futhi ekupheleni iyona isilinganiso sokugcina.
Ukwelashwa kungase kube surgically 3 samuntu. Ukususwa kwezimiso ingxenye ikholoni kuyadingeka kuzo zonke izimo ezintathu. Isimo sokuqala ahlaselwe kabi ubhadane lwesifo, kwenzeka lapho isimila kudlulela uvule imbobo excretory futhi doudenalny ingono. Kulokhu, lo dokotela kususa hhayi kuphela ingxenye 12 amathumbu bawa, kodwa futhi we imbobo kanye nenhloko pancreatic. Uma resection encane isimila olwenziwa isiyingi, okusho ekususeni kuphela abathintekayo isitho sayithi kungenzeka yokutakula. A indlela yesithathu ubizwa nangokuthi resection isiyingi, kodwa yakhetha lapho emathunjini ixhunyiwe komunye, ukuthi zingenza.
ukuba nombono ongafani ngeke
Ukuze sezulu ikusasa udokotela lesiguli kungathi kunjalo, uma wazi, yaqala lapho ukwelashwa. Izinto ezilandelayo zibalulekile: yobudala lomuntu, khona Ukudlulela nezinqubo ukuvuvukala kule emathunjini ipheshana izitho. Isimo siba sibi, uma metastases atholakala esiswini, uhlelo lymph kanye Amapayipi biliary. yezinkinga Okungenzeka kungaholela operation okuyiphutha kohlelo genitourinary. Ngezinye izikhathi kukhona stenosis 12-ka ikholoni asewile, ukopha njalo. Kuthiwa isimo jikelele ngoba iziguli okungekuhle, kodwa asisona esingenathemba. Inkinga iwukuthi ukuthola umdlavuza e zisaqala, lapho ukwelashwa cishe okuqinisekisiwe ukusiza, kunzima kakhulu.
Ukuze uzivikele yilesi sifo esesabekayo yomdlavuza yimuphi omunye emizimbeni, kufanele give up silungise imikhuba emibi futhi aphinde acabange ekudleni kwakho. Kungakhathaliseki kungase kubonakale iseluleko esilula, kodwa benza umsebenzi. Ukudla okunomsoco futhi ukubhema lokuphela kanye notshwala ongavikela ngokumelene eziningi izifo, kanye nemvelo oncological hhayi kuphela.
Siyazi ukuthi umdlavuza duodenum, kanye zonke Yiqiniso yayo kanye nokwelashwa. Ngeshwa, akekho ayikwazi ukuqinisekisa ukuze bazivikele umdlavuza. Sesixoxile ngokubaluleka ngendlela enempilo, kodwa akukho ebaluleke kancane ukunakwa wena amasignali lomzimba wakho. Ngezinye izikhathi kungcono waphinda ukuya kudokotela futhi uyohlola.
Ukuphathwa umdlavuza wendlala
Umdlavuza wendlala yabesilisa ngezinga 2nd: Izibuyekezo yokwelashwa. Izimpawu ze-umdlavuza wesinye kwabesilisa. Isibikezelo bempilo
Isisho of isiRashiya (nge phraseology indaba noma yisiphi isihloko)
Indlela yokwenza uthuli ebomvu "Maynkraft" futhi kungani ukuyisebenzisa?